OEM ဟိုက်ဒရောလစ် compactor ပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Jiwei
အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းများ၏ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီစေရန်အတွက် HMB ဟိုက်ဒရောလစ်ဆောက်လုပ်ရေး compactor သည်တူးဖော်သူများနှင့် backhoe loader များဘက်စုံသုံးနိုင်ခြင်းကိုတိုးချဲ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Hydraulic plate compactor သည်အင်ဂျင်နီယာစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တုန်ခါမှုအားနားလည်ရန်အတွက်အင်ဂျင်စက်မှမက်ဆီကိုဘီးကိုဆီမော်တာမှတဆင့်အဓိကအင်ဂျင်၏ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကိုအသုံးပြုသည်။
။ ဟိုက်ဒရောလစ်ပန်းကန် compactor နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameters တွေကို
HMB compactor သတ်မှတ်ချက်
မော်ဒယ် ယူနစ် HMB400 HMB600 HMB800 HMB1000
အမြင့် မီလီမီတာ 750 930 1000 1100
အကျယ် မီလီမီတာ 550 700 900 900
ပါဝါ တန်4၆.၅ 15 15
တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်း RPM / Min 2000 2000 2200 2200
ရေနံစီးဆင်းမှု L / Min 45-85 85-105 120-170 120-170
ဖိအား ဘား 100-130 100-150 150-200 150-200
သက်ရောက်မှုတိုင်းတာခြင်း မီလီမီတာ 900 * 550 1160 * 700 1350 * 900 1350 * 900
အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် 550-600 750-850 900-1000 1000-1100
သယ်ဆောင် တန် 4-10 ၁၂-၁၆ ၁၈-၂၄ ၂၅-၄၀
။ ရောင်းရန် HMB ဟိုက်ဒရောလစ်ပြားအသေးစားမြေတူးစက်၏အဓိကကောင်းကျိုးများ -
၁။ တစ်နှစ်အာမခံ၊ ၆ လအခမဲ့အစားထိုးနိုင်သည်။
ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် 2.Q345B ပစ္စည်းများ၊ အောက်ခြေပန်းကန်အတွက် NM400 ၀ တ်စုံ;
3. ODM ဝန်ဆောင်မှု။
။ ဟိုက်ဒရောလစ်ပန်းကန် compactor လျှောက်လွှာ
Yantai Jiwei ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီသည်ဟိုက်ဒရောလစ်အကန့်အသတ်များထုတ်လုပ်သည့်စျေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်နေသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ထုတ်လုပ်မှုရှိပြီးရှိပါတယ် 12 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံHyd Hydraulic Breaker, Quick Couplers, Excavator Palte Compactors၊ Earth Augers နှင့် Spare Parts ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် "HMB" ဟိုက်ဒရောလစ်အမြောက်များသည်စီးရီးအပြည့်နှင့်ရှိသည်အားလုံးအမှတ်တံဆိပ် '' တူးဖော်ကိုက်ညီကြသည်။ Yantai Jiwei သည်အရည်အသွေးကိုပထမနေရာတွင်အမြဲတမ်းထားရှိပြီးအမြဲတမ်းအထူးပြုလုပ်ခဲ့သည်QC အဖွဲ့ကုန်ကြမ်းမှကုန်ချောအထိနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရန်။ ငါတို့ကုမ္ပဏီလွန်ပြီCE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုကိုလိုက်စားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုလျင်မြန်စွာပို့ဆောင်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေသခံထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ HMB ထုတ်ကုန်များသည်ယခုအခါဖြစ်သည်နိုင်ငံပေါင်း 80 ကျော်တင်ပို့ ပြီးတော့ရှိပါတယ် အေးဂျင့် ၅၀ ကျော် .
ပထမတန်းစားအရည်အသွေး၊ ပထမတန်းစားနည်းပညာနှင့်ပထမတန်းစားဝန်ဆောင်မှုသည် Jiwei ကိုဖောက်သည်များပိုမိုအသိအမှတ်ပြုလာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်၊ ထုတ်ကုန်များကိုတီထွင်ရန်နှင့်ဖောက်သည်တိုင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Jiwei ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် Success ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်ပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
နောက်တစ်ခု: ဟိုက်ဒရောလစ် pulverizer
ဟိုက်ဒရောလစ် Compactor စျေး
ဟိုက်ဒရောလစ်ပြား Compactor တူးဖော်